1 AMD သို့ USD ᐈ ပွောငျး Դ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ
1 AMD သို့ USD
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇦🇲 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 AMD သို့ USD. ဘယ်လောက်လဲ Դ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ? — $0.00209 USD.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း USD သို့ AMD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် AMD USD သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် AMD USD သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
AMD – အာမေးနီးယားဒရမ်း
ပွောငျး 1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: $0.00209 USD
ပြောင်းပြန်: Դ478.311 AMD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အာမေးနီးယားဒရမ်း ရန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ခဲ့: $0.00205. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် တိုး 0.000040 USD (2.12%).
50 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ100 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ150 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ200 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ250 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ500 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1000 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ2000 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ4000 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ8000 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ200000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ342 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ37440 Presearch သို့ အိန္ဒိယ ရူပီး1.5 ဘရာဇီး ရီးယဲ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ145 ယူရို သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ115000 ကနေဒါ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 ကနေဒါ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 အင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ135 အင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ350 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ သို့ ဖိလစ်ပိုင် ပီဆို12.99 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ0.00001 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ
1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ယူရို1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ဆွစ် ဖရန့်1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ချက်ခိုရိုနာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ပိုလန်ဇလော့တီ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ မက္ကဆီကို ပီဆို1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ အိန္ဒိယ ရူပီး1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီး1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ထိုင်းဘတ်1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ တရုတ် ယွမ်1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ဂျပန်ယန်း1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ရုရှ ရူဘယ်1 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညား
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 23 Feb 2020 04:05:02 +0000.